20 izindawo amahle, ibhungane Emhlabeni
Emhlabeni, kukhona izindawo zokuhlala eziningi lapho ubuhle ayikwazanga amsindise okuseduze "ukufa". Ezinye izindawo amazing bashiywa abantu ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, kungakhathaliseki ukuthi ingozi yempilo, izingxabano, endaweni ezingemnandi noma ukungabi izinzuzo zomnotho. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, namuhla, lezi ishiywe amapaki, izinqaba nemizana ukuheha kithi ehlukile ubuhle - isikhalo ukhohlwe nezindawo bashiya umlando lapho eqandisiwe.
Kingdom Gulliver sika, Japan
Gulliver UMbuso ipaki sidalwe esekelwe indaba zakudala "Travels Gulliver sika." Ngeshwa, Kingdom Gulliver sika kwadingeka awayo nezingqinamba ezingaphezu kwamandla abo. Ngaphezu kwalokho, epaki Yakhiwa eseduze elidumile Japanese "ihlathi ukuzibulala", kodwa wayesesendaweni sisondele kakhulu endlunkulu sehlelo Aum Shinrikyo, obhekene kwamaphekula ngo-1995. Lesi siqiwu lavulwa ngo-1998. Ngenxa khona ongaphakeme, waphoqwa ukuba uvale ngo-2001.
Imayini yedayimane "Ukuthula", Russia
Le mayini - bangaphambili yedayimane elise Mirny, Eastern eSiberia. Ngesikhathi Ukuvalwa yayo ngo-2004 emayini ifinyelele 525 metres uphinde uthele kancane 1200 amamitha amabili ububanzi nokujula, okwenza kube emgodini ngobukhulu igodi emhlabeni. Hole okwami omkhulu ukuze wezasemoyeni ngenhla ivalwe ngoba ezinophephela emhlane ngenxa ezigigabeni ezimbalwa, okuholele ezinophephela emhlane ukuze "ncela" le phansi komoya.
Lesi sakhiwo "Vila Itororo", Brazil
Kwadalwa wezakhiwo Francisco de Castro, lesi sakhiwo kwakuhloselwe ukuba isikhumbuzo umlando edolobheni iSão Paulo, njengoba Castro naye waboshwa ukuyakha kusukela izingxenye phansi izakhiwo mlando. Vila Itororo yakhiwa kuleli emashumini yokuqala yekhulu lamashumi amabili, kodwa uye wahlala ubuningi. Namuhla, sikhuluma ekuguquleni isakhiwo.
Lokhu kanye grand Gothic Revival castle yaziwa nangokuthi Sezinqaba de Noisi. Yakhelwe kule XIX leminyaka Chateau Miranda wahlala lingenamuntu futhi ngokuphelele ngo-1991 ngoba ukulungisa yayo izindleko kanye nokuqukethwe babe kakhulu ngenxa Sebawoti. Naphezu kwakho konke lokhu, abanikazi wayengafuni ukunikeza umasipala enqabeni bamshiya engenalutho futhi ebhidlikayo sitini ngesitini.
Abandoned Indawo egaya izinhlamvu e Sorrento, Italy
Umuzi Sorrento at Naples kukhona canyon ezijulile, eyaziwa nangokuthi "Valley of Mills." Lapho, phakathi kwezimila obukhulu wafihla cishe ngokuphelele esigayweni ubudala ugaye okusanhlamvu kusukela ekuqaleni kwekhulu leshumi. Esigayweni kwadingeka bayeke ngenxa nezinkinga edamini mayelana 1866. Namuhla-ke embozwe oluhlaza, endaweni eyihlane kuyinto ithandwa emzini Sorrento.
Lokhu ukhonkolo ukuze kungadluli esiqhingini ihora esuka ethekwini Nagasaki kwaziwa futhi isidlaliso "impi esheshayo engahlomile kakhulu" noma "umkhumbi wempi".
Inkampani Mitsubishi wathenga isiqhingi 1890 ukuyisebenzisa njengendlela base ngoba kwamanzi izimayini zamalahle. On isakhiwo ukhonkolo wokuqala eJapane yakhiwa kuleli esiqhingini phansi 9th ngo-1917. Lezi ezintsha bokwakha eyayidingeka ukuze ihlanganise lenqwaba abasebenzi, njengoba Hasim siqhingi saba izindawo elinabantu abaningi kakhulu emhlabeni.
Lesi siqhingi elahlwa ngo-1974 ngenxa yokuncipha izimayini zamalahle kanye nekwehla embonini yamalahle iyonke.
esifanekisweni Underwater 'kukaKristu yakwalasha ", Italy
Uma ungene amamitha emanzini ngasogwini Italian Riviera San Fruttuoso olujulile 18, uzothola kwamanzi zethusi esifanekisweni likaJesu Kristu ngamehlo sifisa liya phezulu.
"Kristu yakwalasha" - isithombe amamitha amabili nesigamu ukuphakama, okuyinto wadalwa umqophi Guido Galetti futhi ucwila eMediterranean Sea ngamabomu ngo-Agasti 22 1954. Ngo-2003, uKristu efika siphuma kwalasha ukulungisa, susa inzika, usethe esisekelweni entsha bese ngihlaliswa kolwandle.
Idolobhana Villa Epecuén, Argentina
Villa Epecuén bekulokhu yayithandwa kakhulu izihambeli edolobhaneni Argentina, eyakhelwe lweLake Epekuen - echibini, lizinga usawoti emanzini okuyinto izikhathi 10 ephakeme kunaleyo olwandle. Ngenxa echibini nomphumela zayo zokwelapha sekuyinto edolobhaneni elinabantu abaningi kakhulu.
Nokho, Novemba 10, 1985 umswakama high nasemvuleni okuqhubekayo sezishiye ukwanda umthamo wamanzi kanye ukudabuka naleli damu. Ngo-1993, wonke izivakashi umuzi zifakwa ngaphansi kwamamitha ayi-10 amanzi. Namuhla, lapho amanzi esebohlile, kodwa emzaneni, njalo lahlala belahla.
Isiteshi sesitimela "City Hall", eNew York, eU.SA
Kulesi siteshi wabizwa ngokuthi omunye umasipala amahle kakhulu emhlabeni, kodwa namuhla - isipoki. esiteshini City Hall lavulwa ngo-1904. It kwadalwa wezakhiwo Rafael Gustavino. Abandoned esiteshini nenhle ngokungavamile futhi ohlwini iziteshi kaMasipala kuqala e-New York. Wawuzoba seHholo LeDolobha yavalwa-December 31, 1945 ngenxa ukungakwazi ukwandisa platform yayo.
Abandoned Ipaki yokuzijabulisa, Berlin, Germany
izibankwakazi Headless, ibuthuntu roller coasters futhi eqandisiwe ngesikhathi, isondo Ferris, zonke - Shpreepark, i ishiywe ipaki Berlin. Phakathi 1969 no-2001, le ndawo wayewukuphela indaba ephathwayo epaki hlobo konke Berlin, kanye lonke esempumalanga yeJalimane. Phakathi lamaKhomanisi inkathi epaki okwaduma edonsa elilodwa kanye izivakashi eziyisigidi nesigamu ngonyaka.
Abandoned efulethini eziyinkimbinkimbi, Taiwan
Lesi sakhiwo eziyinkimbinkimbi sidle futhi washiywa wawuzoba endaweni yokuhlala kwedolobha Keelung ku North-Eastern Taiwan. Unfinished isakhiwo yokuhlala eside wema enkulu nemihosha nokhonkolo baye ushiywe ukumuncwa kwe-zasemazweni ikuyo yonke indawo. Ngokwemibiko ethile, i sidle efulethini eziyinkimbinkimbi uya adilize ngokuphelele.
Abandoned ujantshi edepho, Poland
idolobha isiPolish Czestochowa langena zenzeka ekhulwini lamashumi amabili njengoba omunye izikhungo ehola zezimboni ePoland. Impumelelo ukweleta ukutholakala ngo-1846, Warsaw-Vienna ujantshi, okuyinto ixhunywe umuzi lonke elaseYurophu. Namuhla Czestochowa - yizivakashi, edonsa izigidi zezivakashi.
Abaningi babo ufuna ukubona futhi igcwele ukhula futhi washiywa emathuneni isitimela edepho. Kuyinto kakhulu okusikhumbuza wobuciko post-ezibhubhisayo. Kodwa eqinisweni indawo ngempela.
Ngo-1986, lapho kwenzeka le ngozi ngesikhathi eChernobyl amandla enuzi, endaweni enkulu radioactively yingozi. Uhulumeni waseSoviet eyenziwa zithuthe abantu abalinganiselwa cishe eziyikhulu abahlala eduze indawo inhlekelele. Manje maphakathi kule ndawo isibe edolobheni isipoki ka Pripyat.
Ngemva eChernobyl nenhlekelele abakhileyo kwadingeka izinsuku ezimbili ukuba bawushiye lowo muzi. Babevunyelwe ukuthatha nabo kuphela imibhalo esiphansi izinto ezidingekayo siqu futhi abanye ukudla. Yonke enye into waphonswa ngale ndlela futhi kwesokunxele kuya amanga la mavangeli.
Castle MESEN, Belgium
MESEN castle Yakhiwa eduze nedolobhana Ice eBelgium, lizungezwe esingamahektare eziyisikhombisa epaki ndawo. Le nqaba lachithwa futhi lavuselelwa kaningana. Ngemva 1796 wasuka ezandleni Bette umndeni kwamanye kubanikazi waba distillery kuqala, bese ushukela ukucubungula imboni, ukucutshungulwa ugwayi futhi kamuva - evaliwe boarding school for girls emphakathini okusezingeni eliphezulu.
Uma ukubukela kude libukeka isakhiwo ishiywe Saucer flying siwela phezulu egqumeni. Buzludzha - igama hhayi kuphela esiqongweni sentaba, kodwa futhi isakhiwo LamaKhomanisi eBulgaria, elakhiwa ngo-1981. Ngemuva kokuwa kobuKhomanisi, uhulumeni Bulgarian ushiye isakhiwo dengwane futhi yaba yisikhungo lithandwa kakhulu yizivakashi.
Naralend indaba ephathwayo epaki lakhiwa ngo-1961. Waphefumulela abadali kwepaki Disneyland e California, futhi manje zazifuna ukusebenzisa kabusha emkhathini efanayo, ngisho yokukopisha ezikhangayo esemqoka.
Ipaki kwadingeka ukuvala Agasti 31, 2006 ngenxa yokuntula izivakashi. Konke ukuzijabulisa, ukwakhiwa kanye zokudlela kwesokunxele kuleli paki, akafuni, zilapho kuze kube yilolu suku, okunikeza umbono ongavamile surreal landscape.
Ihhotela Rügen, North Korea
Ihhotela Rügen yakhiwe esime iphiramidi maphakathi Pyongyang. Lona mhlawumbe omunye izinto eziyinqaba emhlabeni futhi ukwehluleka loudest phakathi emisebenzini yokwakha yesimanje.
Wancoma ngesikhathi isakhiwo sayo njengoba ehhotela eliphakeme kunawo wonke emhlabeni, Rügen uye namanje asamukelanga isivakashi, naphezu umxhwele engu isakhiwo. Ihhotela namanje lingenamuntu hhayi isiqedile.
Abandoned Ipaki yokuzijabulisa, Pennsylvania, United States
US Amapaki ziyindawo okwesabisayo, lapho elahlwa ngokuphelele. abolile kanye rusting yabo ozimele kanye izakhiwo ishiywe yokuzijabulisa oppressively enhle.
Naphezu kweqiniso lokuthi epaki yokuzijabulisa ayisasetshenziswa watheleka phakathi labhidlika kwakungaziwa ngokuphelele dengwane - kusenabantu abantu abambalwa bukhoma.
Isikhundla wezoMnotho kanye ezindawo ka India - isibonelo emazweni asathuthuka
Titan kwenqubomgomo Russian - Boris Gryzlov
Indlela usimende Uphahla lwangaphakathi plasterboard ngezandla zabo?
Inja isesulo ubunjalo, ukunakekelwa, intengo
Ulwazi olujwayelekile mayelana Navigator for mushroom ukutomula
Helicopter V-12: izici nesithombe
Ukufakwa ku-PC-Mac OS. Isistimu Ukucushwa